TAMAANDHADA HONEY: SHARAXAAD IYO DABEECADAHA KALA DUWAN - NOOCYO YAANYO
Noocyada sii kordhaya Honey dufan ee beerta, beerto iyo daryeelaan yaanyada jaalaha ah
Noocyada kala duwan ee abuurka iyo geedo dalagyada khudaarta ah ayaa abuuray dhibaatooyin gaar ah oo ku wajahan kuwa jecel in ay qodaan beerahooda. Way adagtahay in la doorto, laguna googo galo soo jeedinta suuqa.
Waxaa laga yaabaa in muuqaalka aan caadi ahayn uu noqon doono caws uu ka badan yahay miisaanka leh tamaandho Honey Honey ee uu jecel yahay. Yaa doorashadani ka xumahay.
Dufanka Honey waa noocyo kala duwan oo yaanyo ah, muuqaalka asalka ah ee kaas oo soo raaca dhalid aad u fiican, iska caabin cudur, unpretentiousness iyo dhadhan fiican.
Dufanka Honey: sharaxa iyo astaamaha noocyada kala duwan
Koox yaanyo ah oo kala duwan oo cherry ah waxaa ka mid ah dhibicda Honey, ee sharaxaadda iyo astaamaha kuwaas oo ay jiraan erayo gaar ah oo loogu talagalay beerta beerta.
Abaabulidda duurka sare (ilaa 2 m in lagu koriyo, ilaa hal iyo badh - beerta) caleemaha, mid kasta oo ka mid ah laamood oo ka mid ah la daboolay shimbir of digaag yar yar (12-15 g) dhalaalaya casaan jilicsan-qaabeeya, oo la mid ah dhibco badar waaweyn.
Yaanyada kuwan, kuwaas oo mass oo mararka qaarkood gaari karo 30 g, waxaa lagu magacaabaa dhibcood malab u gaar ah macaan ee saxarka, taas oo, sida ay sharaxaad ka bixiyaan khabiirada, content sonkorta ugu weyn ee yaanyada.
Qodobada degitaanka Honey Honey
Dufanka Honey wuxuu u baahan yahay ilaalin taxadar leh xaaladaha sii kordhaya.
Shuruudaha beeritaanka yaanyada
Beeraleyda qudaarta waxay doortaan wakhti ay beerto, oo ay hagayaan shuruudaha soo socda ee goosashada. Marxaladaha hore ee Bisaylkiisa Honey soo jeedin, sida waafaqsan sharaxaadda kala duwan, abuurka abuurka for geedo bilowga guga. Geedo aad u badan ayaa lagu beeray aqalka dhirta lagu koriyo ama dhulka furan May - horraantii Juun.
Shuruudaha Baahida Honey ee Nalalka iyo Naxaamka
Carrabku waa inuu noqdaa mid nafaqo leh. Xulashada ugu doorbidid waa ciidda bacrin ah oo fudud oo ka kooban isku dar ah ciidda beerta leh humus iyo ciid. Waa lagama maarmaan in la daboolo loona kala qaado todobaadkii. Ka hor inta aan beero, bacriminta potash ah iyo superphosphate ayaa lagu daraa dhulka.
Faa'iido la'aanta Honey ee la xiriirta tayada ciidda waxay lagama maarmaan u tahay in lakabka lakabka sare ee carrada lagu koriyo sanad walba. Horumarka guul leh ee tamaandhada lagu beeray waa suurogal in qorraxdu iftiin. Saamaynta xun ee geedo ee maalmaha daruuro leh waa in laga gudbo iftiin dheeraad ah oo leh nalalka korontada.
Sida loo doorto qalab tayo leh oo tayo leh
The originality (ma aha hybrid) ee kala duwan ee yaanyada Honey ku darayaa astaamaha wanaagsan sidoo kale awood u leh in ay isticmaalaan miraha tayada leh ee beeritaanka. Jarjinta, xoqin iyo ku tirtirida yaanyada oo idil oo qumman oo qallaji ah, qalaji abuurka haray (on barkin), ku rid sanduuqa iyo ku rid meel mugdi ah, taas oo aan la heli karin jiirarka.
Laba sano ama saddex sano kadib, waxay u kici doonaan si wax-ku-ool ah (illaa 96%), laakiin biqilka wuxuu soconayaa ilaa 7 sano. Bacaha abuurka laga iibsado dukaamada waxaa lagu iibiyaa iyadoo la raacayo tilmaamo loo isticmaalo.
Beerista Dufanka Suufiyada
Ka hor inta beero miraha nadiifinta. Tan waxaa lagu sameeyaa qallajinta xalalka aqueous ee daloolka potassium ama hydrogen peroxide. Marka xigta, abuurka waxaa la dhigayaa qoto dheer oo ah 2 cm ciidda qoyan.
Kadibna sanduuqyada culeeyska ah ee lagu daboolay filimka waxaa lagu dhejiyaa qol diiran (+ 22 ... +25 ° C) qol. 7-10 maalmood ka dib, caleemaha ugu horeeya waxay dhalayaan.
Yaanyada sii kordhaya Honey Honey: sida loo daryeelo dalagyada
Koraaya noocyo kala duwan oo yaanyo ah Honey waxa kale oo leh sifooyin gaar ah.
Goobidda geedo iyo daryeelka dambe ee Honey Drop
Caleemaha ugu horreeya ee muuqda waxay muujinaysaa baahida loo qabo qoyaanka yaanyada (waxaad sugi kartaa xaashida labaad). Ka dib waraabinta badan, yaanyada waa inay ka muuqdaan dheriyo kala duwan ama koobab si toos ah sanduuqyada seedling.
Qodobka muhiimka ah ee nidaamka qaadista waa xoqin xididka asaasiga ah si loo sameeyo qaabab cusub. Maadada waa in lagu aasaa ciidda ilaa heerka caleemaha.
Geedo gawaarida ee lagu koriyo ah
Barokaca geedo si ay u noqdaan deegaan joogta ah ayaa ka horreeya adkeynta. Saplings waxay ku qaataan dhowr saacadood hawada cusub.
Greenhouse waxay heshaa martida cusub qeybtii hore ee bisha May. Haddii, si kastaba ha noqotee, dhul furan ayaa loo doortaa beeritaanka, ka dibna taariikhaha ayaa la wareegayaa dhammaadka May - bilowga Juun.
Qodobka guud ee loogu talagalay beeritaanka yaanyada Dufanka Honey ee ciidda waafaqsan nidaamka 40 x 70 cm Khibrad ayaa muujinaysa in mudada u dhaxaysa safafka lagu yareeyn karo 40-45 cm iyada oo aan waxyeelleyn dalagga mustaqbalka - aagga xaddidan ayaa si weyn loo badbaadin doonaa loona hagaajin doonaa.
Ciidda waa inay ahaato mid diiran, hawada ma aha mid aad u qoyan, taas oo ah aqalka dhirta lagu koriyo waa in si joogto ah loo qalajiyo. Marka koray hawada cusub, dhirta dhalinyarada waxaa lagu daboolay filim, iyo dhammaan miraha waa in ay ka danbeeyaan.
Xeerarka waraabinta iyo quudinta
Marka waraabintu ay tahay mid muhiim ah oo leh qadar dhexdhexaad ah oo biyo ah (aan ka badnayn 6 jeer 6dii maalmoodba mar), taas oo ah mid diirran oo difaac leh. Dharka ugu sareeya xalalka biyaha ee macdanta macdanta iyo Bacriminta dabiiciga ah ayaa la sameeyaa hal mar labadii toddobaadba mar inta lagu jiro xilliga geedo sii kordhaya, iyo ka dib marka la beero ee lagu koriyo ama dhulka furan. Marka ay ugxan-yari soo baxaan, duurka yaanyo waxaa lagu daray bacriminta potash, taas oo keenta dardargelinta habka Bisaylkiisa miro.
Ma taqaanaa? Haddii aad dubato ciidda leh arrin bini-aadmi ah, ka dibna lakabka hoose ee qallalan wuxuu noqonayaa nafaqo yaryar oo qoyan oo abuuraya humus, bacriminta yaanyada hab dabiici ah. Tani waxay badbaadin kartaa quudin dheeraad ah.
Sida loo sameeyo taageero ah yaanyada
Kobcinta sare ee cawska yaanyo Dufanka Honey ayaa sababay, iyadoon loo eegin sida iyo meesha ay u koraan, soo saarida khasabka ah ee taageerooyinka xooggan. Garter waxaa lagu fuliyaa labada aqalka dhirta lagu koriyo iyo sariirta beerta.
Beeridda aqalka dhirta loo yaqaan "greenhouse" waxay u baahan tahay isticmaalka trellis toosan ama dhulbeeg. Heerkulka yar ee dhirta ee bannaanka u furan ayaa kuu ogolaanaya inaad ku soo lifaaqdo dhirbaaxo ama shabaqa. Xayawaanka waxay sameeyaan wax ka badan laba ama saddex caws, si aan naxariis lahayn uga saara tallaabooyinka dhinaca.
Sida loola tacaalo cayayaanka iyo cudurrada dhirta
Resistance of Honey dhibco si caadiga ah ee cudurada solanaceous qoyska - gariir goor dambe ah, kallana madow, lugta madow - ma bixin sabab sababid dhameystiran. Gaar ahaan si taxadar leh waxaad u baahan tahay inaad ku jirto kaliya lagu koriyo, halkaas oo inta badan la koray iyo beeray noocaas kala duwan.
Wixii faahfaahin ah mulching ciid leh caws ama peat waxaa loo isticmaalaa. Isku-buufin ka hortag leh "Phytosporin" ama diyaargarow kale oo aan sun aheyn (antiviral iyo antifungal) waxay gacan ka geysan doontaa badbaadinta dhirta inta lagu jiro beerashada waxayna siin doontaa fursad ay ku beerto dalagyo wanaagsan.
Si loola dagaallamo cayayaanka cayayaanka ayaa khuseeya:
duulimaad joogto ah;
ku buufin leh xal aqueous oo ah hydrogen peroxide ama celandine.
Waa muhiim! Gaar ahaan ka hortagga aphids waxay u isticmaalaan daaweynta duurka weerarka leh xal biyo iyo saabuun.
Dufanka Honey waa kala duwanaanta hore dhexdhexaad ah, taas oo ah, goosashada midhaha midhihiisa ayaa laga saari karaa 3-3.5 bilood ka dib - isla mar ahaantaana leh ururinta yaanyada cas ee hore. Fruiting wuxuu qaadanayaa waqti dheer - laga bilaabo bartamihii xagaaga ilaa dhammaadka Sebtembar.
Honey dufan Honey: mudnaanta iyo demerit ee kala duwan
Sida laga soo xigtay khabiirada iyo dib u eegista beeraha beerta, waxaa suurtagal ah in la sameeyo liis qiyaas ah faa'iidooyinka iyo dhinacyada taban ee Tiyoolada Tufaaxa ee Honey.
Liiska ugu horeeya waxaa ku jiri doona macluumaadka soo socda:
Dareemayaasha cuntada cufan, oo aaney helin culeys xad dhaaf ah, waxay ka heli doontaa Honey dhicin qashir badan oo leh waxyaabo kaloori hooseeya.
Qaadashada taageerada dabiiciga ah ee aragti wanaagsan iyo xoojinta darbiyada xididdada dhiigga waxay ka heli doonaan yaanyadaas, oo lagu daro waxyaabo ka sareeya fitamiin A oo dhibco ah.
Kala duwanaanshuhu wuxuu leeyahay difaac adag oo xoog badan oo cudurro ah, gaar ahaan lugta madow iyo phytophthora.
Warshadu waxay u adkaysatay abaarta iyo heerkul aad u hooseeya.
Abuurka Tomato waxay leeyihiin biqil wanaagsan iyo muddada dheer.
Miro yar-yar ayaa ka dhigaysa mid sahlan ee caanaha.
Ma taqaanaa? Waxyaabaha sonkorta ee fiican leh waxay suurtogal u tahay inay suurtogal ka dhigto macaanka macaanka ee yaanyada.
Waxaa ka mid ah caqabadaha ku jira qodobbada soo socda (mararka qaarkood ka soocma mudnaanshaha):
Sababtoo ah farqiga qashinka, dhibicda malabku way yar tahay. Waxay ka mid yihiin isticmaalka yar ee diyaarinta alaabta dhaqameedka - casiir yaanyo iyo koollada yaanyo.
Marka la barbardhigo noocyo kale oo yaanyo ah kuwan hooseeya ee fitamiin C (kuwa loogu talagalay daawo sare, tani waxay noqon kartaa mid lagu daray).
Daryeelka habka koritaanka Honey, gaar ahaan saarista tallaabooyinka, waxay qaadataa waqti badan.
Geeddi waa mid aad u xasaasi u ah isbeddellada qoyaanka hawada iyo qiimaha nafaqada ee carrada, taas oo ah wax xun ee dhalidda.
Waa muhiim! Waa wax aan suurtagal ahayn in la sameeyo pasynkovka, iyada oo aan zaklamiv gebi ahaanba leh jilibka yaanyo.
Faa'idada faa'iidooyinka ay leedahay Honey Drop oo ka sareysa miisaankiisa, guud ahaan, faa'iido daro waxay keenaysaa xaqiiqda ah in dadka deggan ee xagaaga iyo beeraleydu ay joogaan joogtada sariirtooda.
Mawduucyadeeda ballaadhan, oo ay ugu wacan tahay sahlkeeda iyo wacnaanshaheeda isticmaalka, waxay ka dhigeysaa inay lagama maarmaan tahay in si dhow loola socdo Dhibaatada Honey iyo soosaarka warshadaha beeraha.